Guddiga Arimaha Bulshada ee Baarlammaanka Puntland oo la kulmay Masuuliyiinta Wasaaradda Waxbarashada Puntland. – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ October 13, 2020
Kulankan ay guddiga horumarinta ee arrimaha bulshada ee baarlammaanka Puntland kula kulmeen kusimaha Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare, ahna Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ayaa waxaa uu ahaa kulan warbixin lagaga dhegaysanayay, isla markaana su’aalo lagu weyddiinayay Wasiir-ku-xigeenka iyo Agaasimaha Guud.
Bashiir Jaamac Maxamed, Wasiir-ku-xigeenka, ahna kusimaha Wasiirka Waxbarashada, ayaa ku dheeraaday warbixinta Wasaaradda Waxbarashada ee hawsha u qabsoontay waxa u dhiman iyo halka ay hiigsanayso.
Kulanka oo saacado badan qaatay kadib, ayaa warbaahinta Page-ka Wasaaradda waxaa la hadlay Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada ayaa sheegay in guddigu ay danaynayeen in ay xog-ogaal u noqdaan meelaha mashaariicda waxbarasho ay ka socdaan iyo in Wasaaradda Waxbarashadu ay heerarka waxbarasho ogaato.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dowladda Puntland, Maxamed Cali Faarax Farmayeeri, ayaa su’aalo ay weyddiiyeen guddiga arrimaha bulshada Baarlammaanka Puntland sifiican uga jawaabay, isaga oo sheegay in waxbarashada Puntland meel fiican marayso, balse sannadkan ay jireen caqabado dhinaca mashaariicda ah oo uu saameeyey COVID-19, dadaal badanna la sameeyey, walinna caqabado jiraan.
Guddoomiyaha guddiga ee arrimaha horumarinta adeegga bulshada, Cali Dhahar ayaa kusimaha Wasiirka iyo Agaasimaha Guud uga mahadceliyay warbixinta faahfaahsan ee xagga waxbarashada ee ay guddiga siiyeen.
Guddiga ayaa booqday labo waaxood oo kala ah: Waaxda maamulka iyo maaliyadda iyo Waaxda qorshaynta iyo xog uruurinta waxbarashada.
Guddiga adeegga arimaha bulshada ee baarlammaanka Puntland iyo Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ayaa isku afgartay sidii ay iskula shaqayn lahaayeen.